Tsindry Shinoa Tao Amin’ny Vovonan’ny Zavakanto Ao Bangladesh Hanampenam-Bava Ny Fampirantiana Momba An’i Tibet · Global Voices teny Malagasy
Tsindry Shinoa Tao Amin'ny Vovonan'ny Zavakanto Ao Bangladesh Hanampenam-Bava Ny Fampirantiana Momba An'i Tibet
Voadika ny 17 Febroary 2016 5:07 GMT
Zavakanto notakonana taorian'ny fanoherana nataon'ny ambasadaoro shinoa. Sary nampindramin'ny pejy Facebook an'i Wasfia Nazreen
Notontosaina tamin'ny 5 ka hatramin'ny 8 febroary 2016 lasa teo ny Dhaka Art Summit [Vovonan'ny Zavakanton'i Dhaka] izay manasongadina hosodokoa, fanatontosana zavakanto, fijerena sarimihetsika ary famoahana boky. Mampiseho ny zavakanto Aziatika Atsimo ny hetsika mandeha isantaona mampihaona artista, mpampianatra ambaratonga ambony, mpanangona ary mpitsidika an-jatony avy amin'ny faritra sy manerana izao tontolo izao.
Izay heverina ho zavakanto any amin'ny toerana iray anefa dia mety heverina ho fivilian-dalana ara-politika any amin'ny toeran-kafa. Tahaka izany ny tao amin'ny tranohevam-pampitambaovao marolafy iray naorina tamin'ity vovonana ity. Natsangan'ilay Indiana mpanatontosa sarimihetsika Ritu Sarin sy ny vadiny artista Tenzing Sonam, Tibetana iray monina an-tsesintany ao Dharmashala, ny nifantohan'ny fampirantiana tao dia ireo nandoro ny tenany ao Tibet ho fanoherany ny fanjakazakan'i Shina ao amin'ny faritra.
Ny lohatenin'ny ao amin'ilay tranoheva dia “Teny Farany”, izay miompana amin'ny lahatsoratry ny hafatra farany dimy miaraka amin'ny dikanteniny anglisy nosoratan'ireo nandoro ny tenany ireo. Ireo hafatra ireo dia ao anatin'ny sehom-pampitankafatra marolafy avy amin'i Sarin sy Sonam mikasika ny fandoroan-tena nitranga tao anatin'ny enintaona, izay nosokafan'izy mivady tao Delhi tamin'ny desambra lasa teo.
Ny mpanatontosa sarimihetsika sy artista Tenzing Sonam sy Ritu Sarin tao amin'ny Vovonan'ny Zavakanton'i Dhaka miaraka amin'i Wasfia Nazreen (afovoany). Sary nindramina avy amin'ny pejy Facebook-n'i Wasfia Nazreen. 6 Febroary 2016
Nitsidika ny fampirantiana ny Ambasadaoro Shinoa tao Bangladesh, Ma Mingqiang, tamin'ny Asabotsy 6 Febroary ary voatatitra fa “nirehitry” [hatezerana] tamin'ny fahitana ilay fanorenan-javakanto Tibetana, nitaky ny hanalaza azy ireo eo noho eo. Taorian'izay izy nandefa taratasim-panoherana tamin'ny mpikarakara sy nitaky ny hanesorana ireo asa ireo. Voatery ny mpikarakara nanakona ireo tabilao dimy ireo tamin'ny taratasy fotsy izay nankatoavin'ireo artista ny nanaovana izany.
Karazana fihaikana ankolaka ihany angamba ny fanakonana ireo zavatra napetaka ireo nefa navela niankina tamin'ny rindrina.
Navoakan'i Sarin tamin'ny gazety The Indian Express ny loniloniny:
Fampijalian'ny vaventy amin'ny madinika izao. Notakian'ny Shinoa ny hanesorana tsanganasa any amin'ny firenena vahiny. Namoaka taratasy dimy izay hita an-tserasera fotsiny izahay: tsy misy fomba fandraisan-kevitra akory anefa amin'izany.
Ireo tabilao nahantona “Teny Farany” nataon'i Ritu Sarin & Tenzing Sonam araka ny fisehony tamin'ny 5 sy 6 Febroary. Sary nindramina avy amin'ny pejy Facebook an'i Wasfia Nazreen.
Raha nanoratra tao amin'ny Facebook-ny i Wasfia Nazreen, mpananika tendrombohitra, mpikatroka, mpiasa sosialy ary mpanoratra fa “nandrahona hisian'ny vokany mafy dia mafy” ny ambasadaoro raha tsy esorina ireo sanganasa ireo. Nanohy izy:
Tsy gaga [aho] amin'ny fizahozahoana sy ny teknikam-panindriana ataon'ny governemanta shinoa amin'ny fanakombonana ny feon'ireo tsy mitovy hevitra amin'ny filazana ofisialy amin'izay mitranga ao Tibet, saingy, amin'ny farany, momba ny marika fanondroana ahy ho Bangladeshi, olompirenen'ny firenena mahaleotena izany, miala tsiny aho fa TSY AFAKA misambotra ny fanahinay amin'ny alalan'ny hery ianareo.
‘Tsy nahatampina ny feon'ny hetsika na oviana na oviana izany’
Mivaky toy izao ny taratasy iray amin'ireo napetraka:
Izaho, Tsultrim Gyatso, mpiadin'ny ranomandry, no mandoro ny tenako ho amin'ny tombontsoan'ny Tibetana rehetra. Ny ranomaso volamena. Indrisy, ranomaso. Fo vaky. Ry rahalahy, mandre ve ianareo? mahita ve ianareo? Mandre ve ianareo? Any amin'iza no hiresahako ny fijalian'ny Tibetana enina tapitrisa? Vatan'olombelona tafatsoropaka any amin'ny afo. Mandoro ny tenako aho hiverenan'ny Masina ny Dalai Lama any Tibet, hanafahana an'i Panchen Rinpoche avy any am-ponja, ary ho amin'ny fahasalaman'ny Tibetana enina tapitrisa. Enga anie ny vavahadin-tsaina rehetra monina ao amin'ny fanjakana telo ho afaka amin'ny poizina telo ka hahatratra ny toetra maha-Buddha. Enga anie ny lama sy ny Vatosoa Telo hitazona mafy ireo kivy gejain'ny fahefana sady tsy manan-kialofana. Ry rahalahy sy anabavy eo amin'ny Tanin'ny Ranomandry, noho ny firaisan-kinan'i Tibet, aza miantoraka any amin'ny lala-mamitaky ny fosa.
Nandoro ny tenany i Tsultrim Gyatso, 43 taona, tamin'ny 19 Desambra 2013 Sangchu, Prefektiora Tibetana Mizakatenan'i Kanlho, Faritanin'i Gansu. Sary nindramina avy amin'ny pejy Faacebook an'i Wasfia Nazreen..
Ampangain'ny Tibetana ho mamoritra ara-pivavahana sy ara-kolontsaina i Shina, izay nampiditra an'i Tibet ho ao anatin'ny sisintaniny nihoatra ny 60 taona izao. Nahitana fitroarana maventy maro ny tao amin'ny faritra tao ho ao, ary olona am-polony no nandoro tena ho endri-panoheran'olona tsirairay ny fifehezana Shinoa. Fihinin'i Shina mafy dia mafy i Tibet amin'ny fanampenam-bava ny aterineto, fanaraha-maso ny fampitam-baovao ary famerana ny fidiran'ny mpizahatany sy ny gazety iraisampirenena.
Tsy sambany ny governemanta shinoa no niezaka hanakatona fampirantiana mifandraika amin'i Tibet. Tamin'i 2009, nisy tsindry shinoa niteraka ny fanakatonana fampirantian-tsary momba an'i Tibet nantsoina hoe “Mizotra An-Tsesintany | Tibet 1949-2009” niarahan'ny Mpianatra manohana an'i Tibet Afaka–Bangladesh sy ny Drik Bangladesh nanatontosa.
Tao amin'ny antsafa nifanaovana tamin'i Catch News no anoritsoritan'i Sonam ho karazana hafatra inona no tian'i Shina alefa amin'ny alalan'izany hetsika izany :
Aza mandrisika na manome sehatra amin'ny hevitra, fitantarana na feo izay mifanohitra amin'ny tsipika ofisialin'i Shina, indrindra rehefa resaka Tibet or Xinjiang.
Ny fandrahonana ambadiky ny hafatra dia: Raha tsy manaraka izany ianao dia hotapahinay ny fifandraisana ara-toekarena na hanasarotra izany ho anao izahay.
Naneho ny fahatezerany tao amin'ny Twitter ny hafa:
Azoko ihany raha ny governemantan'i Bengladesh no tao ambadiky ny fanakatonana ny fampihantonana zavakanton'i Tibet. Tsy takatro indray ahoana no hanaovan'ny ambasadaoro izany any amin'ny firenenkafa.
Ao amin'ny Facebook, maneho hevitra amim-pihaikana i Ehsan Rahman Zia
Mahatakona tanteraka ny sanganasa mamariparitra ny fangejan'i Shina an'i Tibet tokoa ny taratasy fotsy ao amin'ny vovonan'ny zavakanto ao Dhaka, saingy tsy hahatampina na oviana na oviana ny feon'ny hetsika…#‎আলোআসুক‬ (#Misianymazava)